केन्द्रीय निकायका उम्मेदवार प्रस्ताव गर्ने जिम्मा केपी ओलीलाई
नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनको बन्दशत्रले पार्टीका तीन निकायका अध्यक्ष सहित पदाधिकारी प्रस्ताव गर्ने जिम्मा अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ ।
निवर्तमान उपमहासचिव विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा केन्द्रीय निकायका पदाधिकारीको प्रस्ताव गर्न ओलीलाई जिम्मा दिइएको हो ।
बन्दशत्रमा ओलीले पार्टीको अनुशासन आयोग, लेखा आयोग र निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको सूची प्रस्ताव गर्नेछन् । अनुशासन आयोगमा पूर्व उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीको नाम प्रस्ताव हुने चर्चा छ ।
केपी ओली, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा, लालवावु पण्डित र गोमा देवकोटा सदस्य रहेको अध्यक्ष मण्डलले बन्दशत्र चलाइरहेको छ । बन्दशत्र अहिले पनि जारी छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आफू स्थानीय तहलाई पदाधिकारीविहीन बनाउने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । नेता सिंहले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार समयमै हुनुुपर्ने पनि स्पष्ट पा...
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन् । देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी दिन उनले पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका हुन् । एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव भीष्मराज अधिकारीले पछिल्ल...
चुनावबारे बाबुरामको टिप्पणी : बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरिरहने ?
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले चुनावको मुद्दालाई दलीय स्वार्थबाट नहेर्न आग्रह गरेका छन् । उनले अहिले मुख्य मुद्दा ३ चरणका स्थानीय तहका कार्यका...